Faahfaahin ka soo baxaysa qarax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada Laascaanod – SBC
Faahfaahin ka soo baxaysa qarax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada Laascaanod
Wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in qarax xoogan oo xaley ka dhacay saldhig Booliis ee ku yaal koonfurta magaalada uu sababay dhimasho & dhaawac soo gaarey askar ku sugneyd saldhigaasi.
SBC oo wareysatey qof goob jooge ah ayaa soo sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen laba askari oo ka tirsan ciidamada Police-ka Somaliland halkan sadex kalena uu ka soo gaarey dhaawac, mid ka mid ah askarta dhaawaca ah oo ah nin oday ah ayaa la soo sheegayaa in xaaladiisu ay aad u liidato.
Qaxaran oo ahaa bam-da gacanta laga tuuro ayaa saldhiga waxaa ku wareeray rag tiradooda lagu sheegay ilaa sadex, kuwaasi oo cagaha wax ka dayey markii bamka ay tuureen, waxaana la soo wariyey in ciidamada ku sugan saldhigaasi ay rasaas ooda ka qaadeen markii bamka lagu soo tuuray saldhiga, balse rasaastaasi aanay waxba yeelin kooxihii weerarka soo qaadey iyo dadka rayidka ah ee goobtaasi ka agdhawaa.
Qaraxa oo ahaa mid aad xoogan ayaa dayaankiisa laga maqlay guud ahaan magaalada Laascaanood, iyadoo cabsi xoogan ay soo wajahdey dadka ku dhaqan magaalada.
Ka dib qaraxaasi markii uu dhacay ciidamo ayaa ku dhaqaaqay hawlo baaritaan iyagoo roondo ku marey wadooyinka magaalada, hase yeeshee ilaa iyo haatan lama soo sheegin cid loo soo qabtey fulinta qaraxaasi.
Falkan qarax ee xaley lagu weeraray saldhiga Booliiska ee magaalada Laascaanood ayaa ku soo aadayaa iyaodo mudooyinkii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen oo ay noqonayeen tusbax afka laga furay falalka dilalka qorsheysan & qaraxyada ka dhacaya magaalada Laascanood.